နီမြန်းပြီး သွေးကြောမျှင်များ မြင်နေရသော ထိခိုက်လွယ်အသားအရေ
ထိခိုက်လွယ်သော (သို့) ဓာတ်မတည့်ဖြစ်လွယ်သော အသားအရေ
တုံ့ပြန် ထိခိုက်လွယ်သောအသားအရေ ဆိုင်ရာဆောင်းပါးများနှင့် အကြံပေးချက်များ
ထိခိုက်တုံ့ပြန်လွယ်သော အသားအရေအကြောင်း သိကောင်းစရာ
သင့်အရေပြားက တင်းကြပ်ပြီး စပ်ဖျဉ်ဖျဉ်း ဖြစ်နေပါသလား? နီရောနီသေးလား? အဲလိုမျိုး မနှစ်လိုဖွယ်ခံစားချက်က ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်၊ ဘယ်လိုဂရုပြုရမည်ဆိုတာ ရှာဖွေကြည့်ပါ။
ဂျွတ်ပွေးနာရောဂါ နှင့် seborrhoeic dermatitis အကြောင်း
ဉီးရေပြားနှင့် အရေပြားပေါ်မှာ အကွက်ထခြင်း၊ ယားယံခြင်းတို့ဟာ psoriasis နှင့် seborrhoeic dermatitis တို့ကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ၎င်းတို့ကို သိရှိနားလည်ပြီး အရေပြား မကြာခဏကွာခြင်း ဂရုပြုထိန်းသိမ်းနည်းကိုရှာဖွေပါ၊
အမြဲတမ်း မျက်နှာနီမြန်းနေခြင်းက couperosis သို့မဟုတ် rosacea ခေါ် ရောဂါရဲ့ လကဏာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဲလိုနေရခက်စေတဲ့ ရောဂါ(၂)ခုအကြောင်း သိသင့်သမျှအချက်တွေကို ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
ထိခိုက် တုံ့ပြန်လွယ်သော အသားအရေ
ထိခိုက်တုံ့ပြန်လွယ်သော အရေပြား၏ လက္ခဏတွေသည် စပ်ဖြန်းဖြန်း ဖြစ်ခြင်း၊ ပူနေခြင်း၊ တင်းကြပ်ခြင်း၊ နေသာထိုင်သာမရှိခြင်းနှင့် အနီကွက်များဖြစ်ပါတယ်။
BIODERMA ၏အဖြေ: Sensibio ဆိုတဲ့ ပစ္စည်းတွေက ထိခိုက် တုံပြန်လွယ်သော အရေပြားအတွက် အဓိကထား၍ ထုတ်ထားပါသည်။ အထင်ကရဖြစ်သည့် Créaline H2O micellar water (ထိခိုက် တုံ့ပြန်လွယ်သည့် အရေပြားအတွက် မိတ်ကပ်နှင့် သန့်စင်ရေ) အပြင် အရေပြားဆရာဝန်များ၏ ထောက်ခံမှုရရှိထားသော မျက်နှာအသားအရေ ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် နီမြန်းမှုလျော့ကျပေးသည်။ ခရင်မ်များလည်းရှိပါသည်။ မိမိနှင့်လိုက်ဖက်မည့်အရာကို ရွေးချယ် နိုင်ပါသည်။